တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲ အမြဲကျင်းပနေသည့် နန်နင်းမြို့ - Xinhua News Agency
တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲ အမြဲကျင်းပနေသည့် နန်နင်းမြို့
နန်နင်း၊ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
(၁၈)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲကို စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ နန်နင်းမြို့တွင် အွန်လိုင်း၊အော့ဖ်လိုင်း တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီး(ကျွမ့်လူမျိုး)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည့် နန်နင်းမြို့သည် တရုတ်-အာဆီယံ တံခါးဖွင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ပြတင်းပေါက်ဖြစ်သလို တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲ အစဉ်အမြဲ လက်ခံကျင်းပရာ နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
China From Above | Nanning: the permanent venue of China-ASEAN Expo
The 18th China-ASEAN Expo will be held both online and offline in Nanning from Sept. 10 to 13. As the capital of south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region.Nanning is the window of China’s opening-up and cooperation with ASEAN and the permanent venue of China-ASEAN Expo.
တရုတ်နိုင်ငံ တွင် အမြန်လမ်းထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေးကို မြန်ဆန်ပြီးကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးရန်အလိုအလျောက် နည်းပညာဖြင့်လုပ်ဆောင်
တရုတ်နိုင်ငံ ဆန်းရှီးပြည်နယ် တွင် မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားပြီး ၄ ထပ်တိုက်တစ်လုံးပြို